ပြည်ထောင်စုသားတိုင်းရင်းသားစာရင်း | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ပြည်ထောင်စုသားတိုင်းရင်းသားစာရင်း	Posted by mm thinker on July 24, 2008
Posted in: Anthropology, Research, Sharing.	Tagged: Anthropology, Research.	(သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန်ကျမ်းပြု ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော်၏ စာရင်းဖြစ်ပါသည်။)
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၌နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းလူမျိုး အပြားကို ဆိုလိုသည်။ ဤ၌ ရှေးဟောင်းရာဇ၀င်လာ ဆိတ်သုဉ်းလေပြီးသော လူမျိုးများနှင့် နောက်ပေါ် စာအုပ်စာတမ်း မှတ်သားချက်တို့တွင် ပါဝင်တွေ့ရှိရသော လက်ရှိပြည်ထောင်စုသား လူမျိုးများကိုပါ ရေတွက်ဖေါ်ပြလိုက်သော်လည်း များစွာ ကျန်ရှိပေသေး၏။ (၁) ချင်းလူမျိုး–မြောက်ပိုင်းချင်းများကား ချင်းတောင်နှင့် အထက်ချင်းတွင်းခရိုင်၌ နေကြ၍ အလယ်ပိုင်းချင်းနှင့် တောင်ပိုင်းချင်းတို့ကား ပခုက္ကူ, စစ်တွေခရိုင်, ချင်းတောင် နှင့် တောင်ဘက်ရှိ တောင်တန်းတခို၌ နေထိုင်ကြ၏၊ ချင်းမျိုးကွဲ များစွာရှိကြောင်းကိုလည်း သိရသေးသည်၊ (၂) ကမိ လူမျိုးနှင့်၊ (၃) မြို လူမျိုး– ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း၌ နေကြသည်၊ (၄) ကဒူး လူမျိုး– ကသာနှင့်အထက် မြန်မာပြည် အထက်ချင်းတွင်းခရိုင် တလျှောက်၌ နေကြသည်၊ (၅) ကချင် လူမျိုး– အထက်မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ဖက် အကျဆုံးသော အရပ်တို့၌ နေကြသည်၊ (၆) မရူ လူမျိုး၊ (၇) လရှီ လူမျိုး၊ (၈) ဇီလူမျိုး– မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ဖက်စွန်း မြစ်ကြီးနားခရိုင်နှင့် အခြားခရိုင် များ၌ နေကြသည်၊ (၉) လီရှော၊ သို့မဟုတ် လိဆော လူမျိုး– သံလွင်တောင်ခြား, ရွှေလီနှင့် ဧရာဝတီအတွင်းရှိ တောင်များ, အထက်မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည် အရှေ့မြောက်ဖက်စွန်း၌ နေကြ၏၊ (၁၀) လာဟူ၊ သို့မဟုတ် မုဆိုးလူမျိုး၊ (၁၁) နန်း၊ သို့မဟုတ် ရ၀င်းလူမျိုး– ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၌ နေထိုင်ကြသည်၊ (၁၂) ကော၊ သို့မဟုတ် အခ လူမျိုး– ကျိုင်းတုံနှင့်မဲခေါင်နယ် အရှေ့ဖက် နယ်တလျှောက်၌ နေကြသည်၊ (၁၃) ပလောင် လူမျိုး– ရှမ်းပြည်နှင့်မိုးကုတ်နယ်တလျှောက်၌နေကြသည်၊ (၁၄) ရီယန်းလူမျိုး– တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၏ အရှေ့မြောက်ဖက်၌နေကြသည်၊ (၁၅) ၀ လူမျိုး– ရှမ်းပြည်နယ်၏ အရှေ့ပိုင်း တရုပ်ပြည်နယ်ခြားအနီး၌နေထိုင်ကြသည်၊ (၁၆) ကရင်လူမျိုး– အောက်ဗမာပြည်၏ အရှေ့ဖက်, တောင်ဖက် ရှမ်းပြည်နယ်၏ အနောက်ဖက်နှင့် တောင်ဖက်တလျှောက်၌ နေထိုင်ကြသည်၊ ၄င်းတို့လည်း မျိုးပြားများစွာ ရှိသေး၏၊ (၁၇) တောင်သူ၊ သို့မဟုတ် ပအိုလူမျိုး– အောက်မြန်မာပြည်သထုံခရိုင်နှင့် တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ် အချုိ့တွင် နေထိုင်ကြသည်၊ (၁၈) ဆလုံလူမျိုး– မြိတ်ကျွန်းစု၌နေကြသည်၊ (၁၉) ကယား၊ သို့မဟုတ် ကရင်နီ လူမျိုး– ကယားပြည်နယ်၌နေကြသည်၊ (၂၀) ရှမ်းလူမျိုး၊ (၂၁) မိုင်းသာလူမျိုး၊ (၂၂) ဒရယ်လူမျိုး၊ (၂၃) ရခိုင် လူမျိုး– ရခိုင်တိုင်းနယ်၌နေကြသည်၊ (၂၄) မြန်မာ၊ (၂၅) ထားဝယ် လူမျိုး– တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတလျှောက်၌နေကြသည်၊ (၂၆) ယောလူမျိုး– ပခုက္ကူခရိုင် အနောက်မြောက်ရှိ ယောနယ် တလျှောက်၊ (၂၇) ဒနု လူမျိုး၊ (၂၈) ယပိန်း, ဇပိန်း, သို့မဟုတ် ကွေ လူမျိုး၊ (၂၉) ဖုန် လူမျိုး၊ (၃၀) အင်းသား လူမျိုး၊ (၃၁) တောင်ရိုးလူမျိုး၊ (၃၂) ဒိုင်နက် လူမျိုး၊ (၃၃) ပဒေါင်း လူမျိုး– မြန်မာဆက်များ၊ အများအားဖြင့် ရှမ်းပြည်တောင်တန်းတလျှောက်မှာ နေထိုင်ကြသည်၊ (၃၄) မွန် လူမျိုး၊ (၃၅) ကမု လူမျိုး– (၃၆) ယအိုလူမျိုး၊ (၃၇) မိအိုလူမျိုး၊ (၃၈) ဒနောလူမျိုး– မွန် ခမာဆက် လူမျိုးများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၌နေကြသည်၊ (၃၉) နာဂ လူမျိုး–နာဂတောင်တလျှောက်၊ (၄၀) ကုကီ လူမျိုး၊ (၄၁) ကသည်း လူမျိုး၊ (၄၂) ထမန် လူမျိုး–အထက်ချင်းတွင်းနယ် တောင်ရိုး တောင်ကြားတို့၌နေကြသည်၊ (၄၃) ဂျင်းဖေါ၊ သို့မဟုတ် သိန်းဖော လူမျိုး၊ (၄၄) ခမင် လူမျိုး၊ (၄၅) ခနုန် လူမျိုး–ကချင်ပြည်နယ်၌နေကြသည်၊ (၄၆) ခေါင်းတို လူမျိုး–တောင်တန်းနယ်သားများ၊ (၄၇) ပျူလူမျိုး၊ (၄၈) ကမ်းယံ လူမျိုး၊ (၄၉) သက် လူမျိုး–ရှေးဟောင်း မြန်မာလူမျိုးများ။ ရည်ညွှန်းကိုးကား – သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန် (၂၀၀၇ တည်းဖြတ်ခြင်း)
← ကယန်းလူမျိုးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ	Coming Soon – EM July Issue →	One comment on “ပြည်ထောင်စုသားတိုင်းရင်းသားစာရင်း”